Walmart Pay, asọmpi ọhụrụ maka Apple Pay | Esi m mac
Kemgbe mmalite nke Apple Pay the giant Walmart na-eguzogide mgbe niile ịnakwere teknụzụ a nke na-arụ ọrụ site na iji NFC chips. Kemgbe mmalite nke Apple Pay, Walmart achọpụtala na ọ na-arụ ọrụ na usoro ịkwụ ụgwọ ọhụrụ nke aka ya, iji mee ka ọ dịrị onye ọrụ mfe ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa ha zụtara n'ụlọ ọrụ dị iche iche o nwere na mba ahụ.
Walmart webatara Walmart Pay, usoro ịkwụ ụgwọ nke na-arụ ọrụ site na iji koodu QR, yabụ na ọ dị mkpa ibudata ngwa na gam akporo ma ọ bụ iOS anyị ma were foto nke koodu QR gosipụtara site na ndebanye ego.
Isi uru nke ụdị ịkwụ ụgwọ a bụ na achọghị ngwa ọ bụla nwere mgbawa NFC iji zụta ihe. Dabere na onye isi nke Walmart's e-Commerce division:
Iji gbalịa imeziwanye ụzọ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị si azụ ihe, Walmart amalitela Walmart Pay, nke na-enye anyị ohere, site na ngwa ahụ, ịkwụ ụgwọ site na kredit anyị, debit, kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ iji kaadị akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ.
El ọrụ nke ngwa dị mfe. Mgbe anyị gara ịkwụ ụgwọ na otu n'ime ụlọ ọrụ Walmart, anyị ga-ebido ngwa ahụ, họrọ Walmart Pay ma were foto nke koodu QR nke ngwaọrụ ụlọ ahịa ga-egosi anyị. Mgbe ahụ a ga-akwụ ụgwọ ahụ na-akpaghị aka na-enweghị igosi ụdị nzere ntozu ọ bụla, dị ka ọ na-eme na Apple Pay.
Ihe a niile dị ezigbo mma, mana isi ihe kpatara ya bụ ngwa bụ inwe ike ịchịkwa ego ịkwụ ụgwọ dijitalụ n'otu ebe, na-ejighị ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ iPhone ma ịchọrọ iji ọrụ a, naanị ibudata ngwa a na ngwaọrụ gị ma jikọta ụzọ ịkwụ ụgwọ ị chọrọ iji kwụọ ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Ṅaa » Walmart Pay, asọmpi ọhụrụ maka Apple Pay
Tweetbot maka OS X na-emelitekwa